ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကနေ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု - JAPO Japanese News
ဟူး 13 Mar 2019, 17:11 ညနေ
စာရေးသူငယ်စဥ် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ မတိုင်ခင်လောက်က နောက်ထပ်အနှစ် ၃၀ ကြာရင် ရေနံတွေကုန်ခမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကုန်ခမ်းသွားပြီဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေတော့ အခုထိမရှိသေးပါဘူး။
ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့တောင် ရေနံတူးဖော်တဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်လျက်ရှိပြီး၊ ဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာတွေမှာ ရေနံတွေကို တွေ့ရှိနိုင်သေးတာကလည်း မပျောက်ကွယ်သေးတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးတူးနေဦးမယ်ဆိုရင် ရေနံတွေကုန်ခမ်းသွားဖို့သေချာတာက အရင်တုန်းကတော့ မှန်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ရေနံတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့အခါမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေပြီး လူသားတွေကို ကြီးမားတဲ့ ခြောက်လန့်မှုတွေပေးနေပါတယ်။
အဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောင့် လတ်တလောမှာ လျှပ်စစ်ကားတွေ ပိုမိုပြီးတိုးပွားလာလျက်ရှိပါတယ်။
လေယာဥ်တွေကိုလည်း လျှပ်စစ်နဲ့မောင်းနှင်ရတဲ့ ခေတ်ကိုရောက်လာတော့မလား ? လို့တောင် ပြောနေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီလျှပ်စစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ? ဆိုတာက ပြဿနာရပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အပူစွမ်းအင်နဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုက နောက်ဆုံးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ပြဿနာရှိပြီး၊ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုရင်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖုခုရှိမမြို့မှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ မြေငလျင်နဲ့ အလားတူအဖြစ်မျိုးသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တကယ်ကိုကြောက်စရာပါပဲ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုက ရာသီဥတုပေါ်အများကြီးမူတည်နေတာကြောင့် ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ တခြားလျှပ်စစ်တွေအသုံးပြုမှုအားလုံးကို လွှမ်းခြုံဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုတွေကြားထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က မမျှော်လင့်ထားတဲ့ တီထွင်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
နေရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်း အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နေရောက်ခြည်ကိုထိတွေ့ရုံနဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ပစ္စည်းကို တီထွင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ ဘယ်မှာ၊ ဘယ်လိုသုံးမလဲလို့ သင်တွေးမိပါသလား။
TOYOTA ကနေထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ MIRAI ဆိုတဲ့ စွမ်းအင်အသစ်နဲ့ မောင်းနှင်ရတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နဲ့ မောင်းနှင်ရပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကားတွေကို တော်တော်များများအကြိုက်တွေ့နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာကြောင့် TOYOTA က ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ ကားကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါလိမ့်။
ဒါဟာ လျှပ်စစ်အသုံးပြုပြီးမောင်းနှင်ရတဲ့ကားတွေရဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်တွေကို လျော့ချဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကားတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာ ၃ ရပ်ရှိပါတယ်။
ပထမအချက်ကတော့ ဘတ္ထရီရဲ့ လေးလံမှုဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးဝေးသွားမယ်ဆိုရင် လေးလံတဲ့ဘတ္ထရီကို မတင်မဖြစ်တင်ဆောင်သွားရပါတော့မယ်။
အလေးချိန်က လောင်စာအသုံးပြုတဲ့အခါ သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဘတ္ထရီအစား ပစ္စည်းတွေတင်ရမယ်ဆို ပိုကောင်းမှာပဲနော်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့က အရမ်းကိုပေါ့ပါးတာကြောင့် ဒီတစ်ခုကတော့ အရမ်းကိုကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ဘတ္ထရီနဲ့ အပျော်ခရီးဝေးသွားဖို့ အစီအစဥ်စွဲမယ်ဆိုရင် ပြဿနာတွေရှိလာပါတယ်။
MIRAI က လက်ရှိမှာ 650km အထိမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
၃ ချက်မြောက်က လောင်စာဆီ ထည့်သွင်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကားတွေက အားသွင်းတဲ့အချိန်လည်း အချိန်ကုန်ပါတယ်။
အားသွင်းတဲ့အချိန်က မိနစ် ၃၀ ကနေ ၄၀ လောက်ထိကြာမြင့်စေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့သာဆိုရင်တော့ ဓာတ်ငွေ့ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲဆိုတာကြောင့် ဓာတ်ဆီနဲ့အတူတူပါပဲ။
အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမေ့ပြီး MIRAI ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံပါပဲ။
ဒီတစ်ကြိမ် ကျိုတိုတက္ကသိုလ်ကနေ တီထွင်လိုက်တာ ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေစုပုံစေပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တီထွင်လိုက်တဲ့စွမ်းအင်က နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မဟုတ်ဘဲ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုပြောင်းပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အချက်က နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲ့ ကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ဘတ္ထရီနဲ့သွင်းပြီးသုံးတာကောင်းမယ်လို့ထင်ပေမယ့် ကူးပြောင်းနိုင်စွမ်းနိမ့်လာတာနဲ့ ဘတ္ထရီမှာ ကိရိယာတွေအများကြီးလိုအပ်တာကို စဥ်းစားမိတာ လက်တွေ့ကျပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုသုံးလို့ရတဲ့ အင်ဂျင်ကို TOYOTA ကပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ဒီကနေပြီးစွမ်းအင်ကို လွယ်လွယ်လေးရရှိစေပါတယ်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုရင် ရေကိုဖြိုခွဲလိုက်ရုံနဲ့ ရပြီမလား ?
အဲ့ဒီလိုပဲဆိုပေမယ့် ရေကိုဖြိုခွဲဖို့အတွက် စွမ်းအင်က ဘယ်နေရာကနေရမှာလဲ ?
ဒီတစ်ကြိမ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူပြီး ပြန်လည်ထွက်ရှိလာတာက အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပြီး နေရောင်ခြည်တောက်ပနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့ တခြားစွမ်းအင်ကို အသုံးမပြုဘဲ ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွေကို အဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်။
ဒါကို ကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့ စွမ်းအင်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ အစားထိုးနိုင်တယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးကိုသာယာလှပစေပြီး အရင်းအမြစ်တွေအတွက်စိုးရိမ်ဖို့အတွက်လည်းမလိုအပ်တော့ပါဘူး။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပြီးအသုံးပြုရတာကြောင့် အာကာသမှာလည်း သုံးလို့ရနိုင်လောက်ပါတယ်။
ရေနံကို အမြောက်အများရရှိနိုင်တာက အာဖရိကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်ကနေစပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာကြီးကိုစုဝေးစေတော့မယ့် ခေတ်ဖြစ်လာတော့မလားမသိဘူးနော်။
そばめし( Zoba Meshi ) ကို အိမ်မှာလုပ်စားလိုက်ရအောင် ！
အိမ်မပြောင်းချင်ဘူး။ ရထားတိုက်ခံရပြီး ၁၀ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးသေဆုံး